XOG: Maxaa sal u ah in xilligaan Al-Shabaab ay aad u xoojiso weerarrada? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Maxaa sal u ah in xilligaan Al-Shabaab ay aad u xoojiso...
XOG: Maxaa sal u ah in xilligaan Al-Shabaab ay aad u xoojiso weerarrada?
Muqdisho (Halqaran.com) – Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoojiyay weerarrada ay ka gaysanayan gudaha dalka iyo dibadiisaba, iyadoona ay dadku ku dhalisay walaac ah in awooddii ururka ay korodhay.
Dadka ka faallooda arrimaha dalka ayaa waxay qabaan inay korodhay awooddii Ururka Al-Shabaab, ka dib markii ay sheegeen in ururkaasi uu soo galo dhaqaalo fara-badan, oo u horseedeysa inuu weerarada kordhiyo.
Shariif Xuseen Roobow oo fallanqeeya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in kooxaha ka soo horjeeda dowladda ay canshuuro uruuriyaan, taasoo u sahlaysa inay weerarada sii wadaan.
“Kooxaha dowladda ka soo horjeeda aad bay awoodooda u korortay, lacago ayay qaadaan, canshuuro ayay uruuriyaan, badeecadaha soo degaaya ayay lacago ka qaataan. Lacag badan bay helleen, awoodna way leeyihiin.” Ayuu yiri Shariif Xuseen Roobow.
Wuxuu kaloo sheegay Dowladda Soomaaliya oo la rabay inay la dagaallanto Al-Shabaab ay ku mashquushay xilliga kala guurka, khilaafka kala dhaxeeya Maamul Goboleedyada iyo dhismaha maamulka cusub ee Galmudug.
“Dowladdii la rabay inay Shabaab la dagaalanto waxay ku jirtaa xilli kala guur ah, waqti la rabo in doorasho la galo, marka waxayba mashquul ku tahay hawlahaan doorashooyinka, Maamul Goboleedyadii oo ay iska soo horjeedaan iyo Maamulkii Galmudug oo dhismahiisu socdo, marka dowladdii aad bay mashquul u noqotay. ” Ayuu yiri Shariif Xuseen Roobow.
Isagoo la hadlayay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa wuxuu yiri “Ciidanka Dowladda ee nabadgelyada ama Nabad Suggida waan ognahay tayadooda iyo cidda maanta gacanta ku haysa. Awoodeedii, caqligeedii iyo maaliyadba waxay laheyd dowladda dhinaca doorashooyinka ayay u wareejisay.”
Arrimo kala duwan oo is biirsaday ayuu sheegay inay Al Shabaab ka caawisay inay laba laabto weeraradooda, iyadoo uu muujiyay inay Shabaabku hellaanba dhaqaale ka badan midka soo gala dowladda.
“Waa sanadkii ugu dambeeyay, sanadka soo socda 2021 dowladda waxaa laga rabaa inay doorasho samayso, arrimahaasi oo is biirsaday ayaa keenay inay kororto awoodda Shabaab. Shabaab oo lacago helay ama maaliyad fiican haystay sanooyinkan ugu dambeeyay oo dakhli fiicanaa soo gala. Dakhliga dowladda qaadanayso mid ka badan inay soo gasho ayaa la qiyaasayaa.” Ayuu yiri Shariif Xuseen.
Weerarkii ugu dambeeyay ay Axadii Al Shabaab ku gashay xerada Camp Simba ee Deegaanka Mandy Bay ee Gobolka Xeebta Kenya ayaa dunida u muujiyay sawir ka bedelin midkii Al Shabaab laga haystay, muddooyinkii ugu dambeysay.
Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegaa markasta oo loo fisho inay hoos u dhacday awoodoodii inay la soo baxaan dardar xoog leh, oo ay ku muujinayan cududooda iyo inay weli weeraro waaweyn gaysan karaan.
Maxaa sal u ah in xilligaan Al-Shabaab ay aad u xoojiso weerarrada